Ibhanti Ubude & Uxinzelelo - Shenzhen HONGSBELT
Amanqaku eCatenary Sag
Xa ibhanti liqhuba, kubaluleke kakhulu ukugcina ukunyanzeliswa okufanelekileyo, ubude obufanelekileyo bebhanti, kwaye akukho nanye nayiphi na into engekhoyo phakathi kwebhanti kunye ne-sprockets. Xa umhambisi wokuthutha esebenza, ubude obongezelelweyo buya kutsalwa yi-catenary sag ngendlela ebuyayo ukuze kugcinwe uxinezeleko olufanelekileyo lokutsalwa kwebhanti.
Ukuba ibhanti lokuhambisa linobude obugqithisileyo kwindlela yokubuya, i-drive/Idler sprocket iya kuba nobudlelwane obulahlekileyo kunye nebhanti, kwaye ibangele ukuba ii-sprockets ziqhawule umkhondo okanye iireyili kumhambisi. Ngokuchasene noko, ukuba ibhanti liqinisiwe kwaye lifutshane, ukutsalwa koxinzelelo kuya kwanda, lo xinzelelo oluqinileyo luya kubangela indlela yokuthwala ibhanti kwimeko yokubuyisela okanye i-motor igqithise ukulayisha ngexesha lokusebenza. Ukukhuhlana okubangelwa kukuqiniswa kokuqina kwebhanti kunokunciphisa ubomi bebhanti lokuhambisa.
Ngenxa yemeko yomzimba yokwandiswa kwe-thermal kunye nokucutheka kutshintsho lobushushu, kuyimfuneko ukwandisa okanye ukunciphisa ubude be-catenary sag ngendlela yokubuyisela. Nangona kunjalo, kunqabile ukufumana idimension ye-catenary sag ngokubala idimension echanekileyo phakathi kweendawo zokudityaniswa kunye nowona mlinganiso we-sprockets ofunekayo ngexesha lothethathethwano. Ihlala ingahoywa ngexesha loyilo.
Sidwelisa eminye imizekelo yamava asebenzayo kunye nohlalutyo lwamanani oluchanekileyo lwereferensi yabasebenzisi ngaphambi kokusebenzisa iimveliso ze-serial ze-HOGNSBELT. Ukulungiswa koxinzelelo olufanelekileyo, nceda ujonge kuhlengahlengiso lweTension kunye neCatenary Sag Table kwesi sahluko.
Ngokubanzi, sibize umhambisi obude obungaphantsi kwe-2M emfutshane yokuhambisa. Kuyilo lokuhanjiswa komgama omfutshane, akufuneki kufakwe i-wearstrips kwindlela yokubuya. Kodwa ubude be-catenary sag kufuneka ilawulwe ngaphakathi kwe-100mm.
Ukuba ubude obupheleleyo benkqubo yokuhambisa abukho ngaphezu kwe-3.5M, umgama omncinci phakathi kwe-sprocket ye-drive kunye ne-return way wearstrip kufuneka ilawulwe ngaphakathi kwe-600mm.
Ukuba ubude obupheleleyo benkqubo yokuhambisa ingaphezulu kwe-3.5M, umgama omkhulu phakathi kwe-sprocket ye-drive kunye ne-returnway wearstrip kufuneka ilawulwe ngaphakathi kwe-1000mm.
Umgama oPhakathi kunye nomgama omde
Ubude be-conveyor bungaphezulu kwe-20M, kwaye isantya singaphantsi kwe-12m / min.
Ubude be-conveyor bufutshane kune-18m, kwaye isantya sifikelela kwi-40m / min.
Umzobo ongasentla sisidluliseli esineendlela ezimbini nokuyilwa kwemoto enye, indlela yokuthwala kunye nendlela yokubuya zombini ziyilwe zinenkxaso yeentambo zokunxiba.
Lo mfanekiso ungentla ngumhambisi we-bidirectional onoyilo lweenjini ezimbini. Kwi-synchronizer brake kunye nesixhobo se-clutch brake, nceda uqhagamshelane nevenkile ye-hardware ngolwazi olungakumbi.
D (imiz.) 180 150 180 60 150
Amanqaku okuLungisa Uxinzelelo
Isantya sokusebenza sebhanti yokuhambisa ngokuqhelekileyo kufuneka sihambelane nenjongo yokuhambisa eyahlukileyo. Ibhanti lokuhambisa le-HONGSEBLT lilungele isantya sokusebenza esahlukeneyo, nceda uqwalasele umlinganiselo phakathi kwesantya sebhanti kunye nobude besagi yekatenary ngelixa usebenzisa ibhanti lokuhambisa le-HONGSEBLT. Omnye umsebenzi oyintloko we-catenary sag kwindlela yokubuyisela kukubonelela ngokunyuka okanye ukuncipha kobude bebhanti. Kuyimfuneko ukulawula ubude be-catenary sag kuluhlu olufanelekileyo, ukugcina ukunyanzeliswa okwaneleyo kwebhanti emva kokuzibandakanya kunye ne-sprockets ye-drive shaft. Ibaluleke kakhulu inqaku kuyilo jikelele. Ngomlinganiselo ochanekileyo webhanti, nceda ubhekisele kwiCatenary Sag Table kunye noBalo loBude kwesi sahluko.
Ngokuphathelele injongo yokufumana uxinzelelo olufanelekileyo kwibhanti yokuhambisa. ngokusisiseko isihambisi akukho mfuneko yakufakela ngesixhobo sohlengahlengiso loxinzelelo kwisakhelo sokuhambisa, kufuneka sinyuse okanye sicuthe ubude bebhanti, kodwa ifuna ixesha elininzi lokusebenza ukufumana uxinzelelo olululo kuyo. Ke ngoko, ukufakela uhlengahlengiso loxinzelelo kwidrive/ivili eliqhutywayo lokuhambisa yindlela elula yokufumana uxinzelelo olufanelekileyo nolufanelekileyo.
Ulungelelwaniso lweSimbo sokuKhwaqa
Ngesizathu sokufumana i-tension yebhanti efanelekileyo kunye nokusebenza kakuhle. I-Screw style take-ups shift the position of one shifts, ngokuqhelekileyo i-idler, ngokusebenzisa izikrufu zomatshini ezilungelelanisiweyo. Iibheringi zeshaft zibekwe kwiindawo zokubeka ezithe tye kwisakhelo sokuhambisa. I-screw style take-ups isetyenziselwa ukuhambisa i-shaft ngobude, ngaloo ndlela itshintsha ubude bomhambisi. Umgama omncinci phakathi kwendawo engenzi nto kufuneka ugcine ubuncinci be-1.3% ububanzi bobude befreyimu yokuhambisa, kwaye ungabi ngaphantsi kwe-45mm.
Amanqaku oQalo loBubushushu obuphantsi
Xa ibhanti le-HONGSBELT lisetyenziswa kwimeko yobushushu obuphantsi, kufuneka kuqatshelwe into ekhenkcezayo kwibhanti ngexesha lokuqalisa. Kungenxa yokuba amanzi aseleyo asele emva kokuhlamba okanye ukuvalwa kwexesha lokugqibela, aya kuqina ngelixa ubushushu obuphantsi bubuyela kubushushu obuqhelekileyo kwaye indawo edibeneyo yebhanti iya kubanda; oko kuya kufohla inkqubo yokuhambisa.
Ukuthintela le nto ngexesha lomsebenzi, kuyimfuneko ukuqalisa umthumeli kwimeko yokusebenza kuqala, kwaye emva koko uqalise iifeni zefriji ukomisa amanzi aseleyo ngokuthe ngcembe, ukugcina indawo yokudibanisa ikwimeko esebenzayo. Le nkqubo inokunqanda ukuphuka komhambisi ngenxa yoxinzelelo olunamandla olubangelwa ngenxa yamanzi aseleyo kwindawo yokudibanisa ibhanti enomkhenkce.
Isimbo soMxhuzulane siThathe-Up Roller
Kwimeko yokusebenza kweqondo lokushisa eliphantsi, iileyili ezixhasayo zinokukhubaza ngenxa yokunyathela phantsi kobushushu obubandayo, kwaye indawo yokudibanisa ibhanti iya kukhenkcela, nayo. Oko kuya kubangela ukuba ibhanti lokuhambisa lisebenze kunye nemeko yokungena eyahlukileyo ekusebenzeni kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo. Ngoko ke, sincoma ukufaka i-gravity take-up roller kwibhanti ngendlela yokubuyisela; inokugcina uxinzelelo olufanelekileyo lwebhanti kunye nokuzibandakanya okufanelekileyo kwi-sprockets. Akuyimfuneko ukufaka i-gravity take-up roller kwindawo ethile; kunjalo, ukuyifaka ivaliwe njengoko shaft drive uya kufumana eyona siphumo sisebenzayo.
UkuThatha isimbo soMxhuzulane
Ukuthathwa kwesimbo somxhuzulane kunokusebenza kwiimeko ezilandelayo:
Utshintsho lobushushu ngaphezu kwe-25°C.
Ubude besakhelo sokuhambisa bude kune-23M.
Ubude besakhelo sokuhambisa singaphantsi kwe-15 M, kwaye isantya siphezulu kune-28M / min.
Isantya sokusebenza okuphakathi yi-15M / min, kwaye umyinge wokulayisha ungaphezulu kwe-115 kg / M2.
Umzekelo weSitayile soMxhuzulane wokuThatha iRola
Kukho iindlela ezimbini zohlengahlengiso loxinzelelo lwesitayile somxhuzulane wokuthatha i-roller; enye luhlobo lwe-catenary sag kwaye enye luhlobo lwe-cantilever. Sicebisa ukuba wamkele uhlobo lwe-catenary sag kwindawo yobushushu obuphantsi; ukuba isantya sokusebenza singaphezulu kwe-28M/min, siyakucebisa ukuba uthabathe uhlobo lwe-cantilever.
Ngobunzima obuqhelekileyo be-roller yokuthatha i-gravity style, iqondo lokushisa eliqhelekileyo elingaphezu kwe-5 ° C kufuneka libe yi-35 Kg / m kwaye elingaphantsi kwe-5 °C kufuneka libe yi-45 Kg / m.
Kwimimiselo ye-diameter ye-gravity style take-up roller, uchungechunge lwe-100 kunye nochungechunge lwama-300 kufuneka lube ngaphezu kwe-200mm, kwaye uchungechunge lwama-200 kufuneka lube ngaphezu kwe-150mm.
K I-coefficient yokutshintsha kobushushu mm / m
L Ubude besakhelo somhambisi mm
I-IB Ubude bethiyori yebhanti yokuhambisa mm
LE Ukutshintsha kwe-catenary sag mm
I-LS1 Ubude bebhanti kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo mm
LS Ubude bebhanti emva kokutshintsha kweqondo lokushisa mm
PD Idayamitha yesprocket yokuqhuba mm
PI Idayamitha ye-idler sprocket mm
RP Buyela indlela ye-roller pitch mm
Ngexabiso le-LE & RP, nceda ubhekisele kwiCatenary Sag Table kwimenyu esekhohlo.
Itheyibhile yoKwahluka koBubushushu beCoefficient yeTheyibhile - K
Uluhlu lobushushu Ubude bomlinganiso ( K ​​)
Ubude besakhelo sokuhambisa yi-9000mm; ukwamkela Series 100BFE apho ububanzi 800mm, isithuba kwi-roller indlela yokubuya yi-950mm, i-drive/idler sprockets zikhethwa ukuba zamkele uthotho SPK12FC apho ububanzi yi 192mm, isantya sokubaleka yi-15m/min, kunye noluhlu lobushushu bokusebenza ukusuka -20 °C ukuya kuma-20°C. Isiphumo sokubala sokulinganisa ukuhlohla ngolu hlobo lulandelayo:
LS=18743+(18743×0.01)=18930 ( Ubungakanani buyanda xa kufinyezwa)
Isiphumo sokubala yi-18930mm yofakelo lokwenene
Ubude besakhelo sokuhambisa yi-7500mm; ukwamkela Series 100AFP apho ububanzi 600mm, isithuba kwi-roller indlela yokubuya yi-950mm, i-drive/idler sprockets zikhethwa ukuba zamkele SPK8FC apho ububanzi 128mm, isantya ebaleka 20M/min, kunye noluhlu lobushushu yokusebenza ukusuka 20 °C ukuya 65°C. Isiphumo sokubala sokulinganisa ukuhlohla ngolu hlobo lulandelayo:
LS=15519-( 15519 × 0.008 )=15395 (ukunciphisa ubude bebhanti xa kushushu kwandiswa)
Isiphumo sokubala yi-15395mm yofakelo lokwenene.
Itheyibhile yeCatenary Sag
Ubude beConveyor Isantya (m/min) RP ( mm ) Ubuninzi be-SAG (mm) Ubushushu be-Ambient (°C)
30 ~ 35 650 35 4 1 ~ 70 - 5 ~ 30 -10 ~ 80
Xa isantya singaphezu kwe-20m / min, sincoma ukwamkela iibhola zebhola ukuxhasa ibhanti kwindlela yokubuya.
Nokuba yeyiphi isantya soyilo, i-motor yokuqhuba kufuneka yamkele isixhobo sokunciphisa isantya, kwaye iqalise ngesantya esiphantsi.
Sincoma ixabiso le-RP njengowona mgama ungcono. Isithuba kuyilo lokwenene kufuneka sibe ngaphantsi kwexabiso RP. Kwisithuba phakathi kweerola zendlela yokubuya, ungabhekisa kwitheyibhile engentla.
Ixabiso i-SAG ngowona mlinganiselo uphezulu; ukunwebeka kwebhanti kufuneka kulawulwe kuluhlu lwexabiso le-SAG.
Ixabiso le-LE linyuka ubude be-sag emva kokususa ubude bebhanti kwithiyori.